Maitiro Ekugadzira Yako Mahara iPhone Ringtones | IPhone nhau
Maitiro ekugadzira yako iPhone kurira kwemahara
Luis Padilla | | iOS 12, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Iyo katoni yekurira ye iPhone yedu haina kunyanya kusiyana, uye nenhamba yePhones mumugwagwa, angangoita ese ane toni imwechete, zvakajairika kuti munhu ari patafura inotevera aridze uye iwe ufunge kuti ndeyako ndeipi. Zvakanaka kunyangwe zvingaratidzika kunge zvakadaro hazvidi kuti ushandise mari kuti ugone kuve neyako ringtone, uye zvakare zvakareruka kwazvo kuitora.
Isu tinotsanangura kuti sei neAllTrans chirongwa, chemberi chekushandisa manejimendi chikumbiro che iPhone yako, unogona kugadzira rako rekurira mukati memaminetsi mashoma uye wochinjisa kune yako iPhone, uye zvese mahara, hautombofaniri kutenga iyo yakazara app.
AnyTrans chishandiso chakazara kugadzirisa zvese zvirimo pane yako iPhone kana iPad: tumira kunze kwemukati kune komputa yako, wedzera zvemukati kune chako chishandiso, chiumbise, chishandise seye USB memory, gadzira backup yeyako skrini… Pane zvakawanda zvatingasarudza pamwe nezvakazara shanduro yacho, mutengo wacho uri € 39,99 nekurarama kwehupenyu. Asi pane zvakare zvinhu izvo zvinotibvumidza isu kuti tiite neyemahara vhezheni. Kudhawunirodha kwako kunogona kuitwa kubva Iyi link.
Kamwe iko kunyorera kuri kudhanilodwa, tinofanirwa kubatanidza iPhone yedu kwariri tichishandisa tambo ye USB uye kuitisa Nekudzvanya pahwindo rekushandisa, Pa «Maneja Chishandiso» (kumusoro) tinogona kuwana izvo zvatiri kutsvaga: Tone maneja. Iyi sarudzo nyowani yekuti iko kunyorera kwave kungowedzera kune ayo mashandiro uye ndizvo zvichatibatsira nyore kugadzira ringtone yedu ye iPhone yedu.
Iye zvino isu tine akati wandei sarudzo: inokurumidza uye yakapusa chinhu chinhu dhonza iyo mp3 odhiyo faira nerwiyo rwatinoda kuwedzera pahwindo, ipo chaipo pabhokisi dzvuku riri mumufananidzo. Tinogona zvakare kuzvitsvaga pakombuta yedu, chishandiso kana raibhurari yeTunes zvine sarudzo pazasi pehwindo.
Ipapo imwe hwindo ichaonekwa nenziyo uye dzakasiyana sarudzo. Iwe uchaona chidimbu chakaputirwa mugirinhi iyo ingori mheremhere yatichagadzira. Nokutadza ndiwo masekondi makumi mashanu nemapfumbamwe, asi isu tinogona kuiita ipfupi kana tichida. Kufambisa mitsara yakasvibira kubva kune rumwe rutivi kuenda kune rumwe tichakwanisa kusarudza chidimbu icho chatinoda kuisa mu ringtone, uye ne "Inzwa" sarudzo isu tichateerera kune icho chakasarudzwa chidimbu. Kana tangosarudza, tinya pa «Tumira kune chishandiso».
Isu tinogona ikozvino kuenda kuchirongwa Zvirongwa kuti tiwane Ringtones uye sarudza iyi toni ichangobva kugadzirwa. Isu tinogona kugadzira kufona kana meseji toni, ine akasiyana nguva, uye rangarira izvo kubva kumagadzirirwo emidziyo isu tinogona kugovera matoni akasiyana kune akasiyana mazita kuziva ndiani arikutisheedza pasina kutarisa iyo iPhone skrini. Nyore, yakapusa uye yemahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 12 » Maitiro ekugadzira yako iPhone kurira kwemahara
Ndatenda, ndichaedza kana zviri nyore kugadzira toni.
Ne iTunes unoita kuti zvive nyore uye haufanire kushandisa pazvirongwa kana kurodha chechitatu-bato maturusi. Zvakanaka nyore
Izvo zvinogona kuitwa, asi hazvisi nyore, ndezvechokwadi.
Zvinogona here kuitwa? Chii? nekuti kubvira pavakachinja iyo vhezheni vhezheni ini handizive kuti ndozviita sei futi. uye ini handizive kuisa maroni pafoni zvakare
Apple inounganidza akateedzana enhau ezve nhepfenyuro pane ayo Apple Watch Series 4
Tora Koogeek Swichi yeKeKKit kusvika ku33% kubviswa